Ungabhekana kanjani nokwesaba kwakho ukuze ukunqobe | Bezzia
Uqala kanjani ukunqoba ukwesaba kwakho
USusana Garcia | | I-Psychology, Psychology nezithandani
bonke kukhona esikwesabayo, wezinto ezingokoqobo nezinto ezingezona ezingokoqobo kodwa ezingabonakala, zezinto ezisengqondweni yethu nasezintweni ezikhona neziseduze nathi. Ukwesaba kuyinto ejwayelekile futhi kusisiza ukuthi sigweme izingozi, kepha kwesinye isikhathi nakho kuyasikhubaza lapho sibhekene nezinto esingahlula kalula.
Ukuba nesibindi kusho ukucabanga ukuthi siyesaba futhi sibhekane nayo ukuzama ukuyinqoba, ukuze sibe namandla kakhulu. Kungakho sizokunikeza amanye amathiphu okuqala ukunqoba ukwesaba okusigcina sikhubazekile kwezinye izici zempilo yethu futhi okungasivumeli ukuthi sikujabulele ngokuphelele konke.
1 Thatha sengathi uvalo lukhona
2 Gxila kulokho okuwesabayo
3 Ziveze kancane kancane
4 Vuma ukuthi awukwazi ukulawula konke
Thatha sengathi uvalo lukhona
Kunabantu abaningi okuthi abakwenzayo uma bebhekene nokuthile okubesabisayo ukuphika futhi baphike ukuthi bayesaba. Bayakugwema nje futhi bawugqibe lowo mcabango, kepha lokho kuphatheka kabi kusekhona, ngakho-ke kungaziveza ngezindlela eziningi, ngokucindezeleka noma isimo esibi. Ngakho-ke into yokuqala okufanele siyenze ukunqoba okuthile ukwazi ukuthi ikhona futhi ikhona. Kufanele sifunde ukukhomba okusesabisayo. Akudingeki ukuthi ibe yinto engokwenyama, ngoba singasaba nokuzibophezela, ukuvula omunye umuntu noma ukuhlangana nabantu. Konke kungasethusa kepha ngenxa yalesi sizathu asibangcono noma sibi kakhulu, ngoba wonke umuntu wesaba okuthile. Uma wazi ukuthi uyesaba, ungabona ukuthi yini oyesabayo futhi ubone ukuthi lokho kwesaba kukusiza ngempela yini noma kumane kukuhudula okukuvimbela ukuthi uye phambili.
Gxila kulokho okuwesabayo
Ukuze unqobe ukwesaba kufanele ukubheke ngqo, okungukuthi, ucabange ukuthi yilokhu okwesabayo nokuthi kungaba namiphi imiphumela. Ezimweni eziningi kakhulu, lapho sibona okusethusa ngqo, ngaphandle kokukugwema, siyabona ukuthi akukubi kangako nokuthi singakunqoba. Kulokhu kubalulekile ukusebenzisa ukucabanga okunengqondo, ngoba ukwesaba kuyimpendulo engokwemvelo. Uma umqondo usitshela ukuthi akufanele sisabe leso simo noma leyo nto ngaleso sikhathi singaqala ukukuqonda futhi sibhekane nokwesaba. Kufanele uqaphele ukuthi ukucabanga ngakho konke okubi okungenzeka kithi kubi kunokukubhekana nakho nakanjani.
Ziveze kancane kancane
Hhayi kuzo zonke izimo kungenziwa, kepha uma unethuba, zama ukuziveza kancane kancane kulokho kwesaba. Okusho ukuthi, uma wesaba amagagasi, akufanele uzicwilise kulawa amakhulu, kodwa zama amagagasi amancane ukuze ulahlekelwe yilokho kwesaba. Uma ubona ukuthi akukho okungahambi kahle kuwe, uzokwazi ukugeza amagagasi amakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Kwenzeka okufanayo uma wesaba izinja, zama ukuzihlanganisa nezinja ezincane nezinenhlonipho othembela kuzo futhi kuzoba lula kuwe ukuthi ulahlekelwe ukwesaba.
Vuma ukuthi awukwazi ukulawula konke
Abantu abesaba futhi bafuna ukuyilawula, kepha kufanele sivume ukuthi kwesinye isikhathi akunakwenzeka ukulawula konke okwenzekayo. I- impilo igcwele ukungaqiniseki kokuhle nokubi, ngakho-ke akufanele siphile sicabanga ngakho konke okubi okungenzeka. Kufanele sigxile kulokho esingakulawula futhi esinamandla athile phezu kwako. Okunye kufanele kusikhathaze ngezinga elithile, kepha ngaphandle kokusikhubaza. Okusho ukuthi, akusizi ukukhathazeka ngezingozi zendiza ngaphambi kokungena ebhanoyini, ngaleyo ndlela kwakheke ukwesaba isimo esingahle singenzeki, kepha esingakwazi ukusilawula.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » Uqala kanjani ukunqoba ukwesaba kwakho
Izinzuzo zikawoyela wokubhodla
Ikhekhe likashizi elinosawoti, i-ham nembuzi